Dia nizara efijery fidirana amin'ny maro sahaza - MAMPIASA Miara - Video firesahana amin'ny firaisana ara-nofo. Velona ny fampielezam-peo sy ny Fiarahana.
Asao ny ekipa ho amin'ny varavarana lamba, ary manomboka amin'ny famoronana ny tena zava-mahagaga rehetra, ka dia ho tsara kokoa aza raha nipetraka teo amin'ny latabatra iray ihanyTotozy cursors miseho amin'ny efijery, ary na iza na iza dia afaka mitarika ny fivoriana na oviana na oviana. Manampy ny fifandraisana, mahalala rehefa misy, ary hizara ny lamba amin'ny iray-tsindry. Hanova ny andraikitry ny filoha amin'ny fotoana rehetra, izy ireo dia afaka mizara ny fampiharana. Asao ny vahiny izay tsy manana ny fampiharana napetraka sy handefa azy ireo rohy (adiresy mailaka na rohy mivantana). Afaka mampifandray avy hatrany ny tranonkala navigateur (Chrome, Firefox, Opera na Safari) tsy misy manana ny hametraka na misoratra anarana ny plugin. Amin'ny Chat miaraka amin'ny ekipa ianao raha miara-miasa ny tolotra sy ny manao ny zava-drehetra haingana. Mampiasa ny vondrona miaraka amin'ny voice chat fanohanana amin'ny teny kalitao sy ny echo fanafoanana. Lavitra roa miaraka amin'ny mpiara-milalao ao amin'ny toerana tena IDE. Manatsara ny toetra ny fehezan-dalàna avy na aiza na aiza eto amin'izao tontolo izao. Miara ianao no matanjaka kokoa. Feno olona ny fandaharana.
AMPIASAINA Miaraka ny fitsipika, dia manasa ny ekipa iray manontolo ho amin'ny efijery.
Miaraka AMPIASAINA Miaraka, dia afaka mizara ny rehetra ny fampiharana mihazakazaka eo amin'ny efijery: Ny toerana tena sary tonian-dahatsoratra, fampisehoana rindrambaiko, horonan-tsary, ny mailaka, ary kokoa.
Mizara ny efijery manontolo na ny tokan-tena fampiharana ary afeno ao amin'ny biraonao, fa tsy te-hijery. Ny FAMPIASANA Miaraka no afaka jerena ao amin'ny aterineto (fisoratana anarana maimaim-poana mba hahazoana ny version beta) na toy ny raharaham-barotra manome (jereo ny etsy ambany). Mizara ny lamba lavitra miaraka amin'ny maro ny fanohanana ny totozy cursors sy manararaotra ny nampiarahina torohevitra ho an'ny fiaraha-miasa.
AMPIASAINA Miaraka adapts ho ao amin'ny tambajotra ara-barotra samy hafa endrika sy ny karazana endpoints, izay niafara tamin'ny mahomby ny passante fampiasana.
Fahita matetika ny FAMPIASANA dia mifototra amin'ny WebRTC fitsipika sy mamela anao handray anjara ao ny lamba toy ny mora toy ny fanokafana web navigateur, satria tsy miankina amin'ny sehatra sy fitaovana. MAMPIASA Miara-miasa fifadian-kanina, na dia mampifandray tsikelikely, noho ny fanohanana ny lahatsary farany encoding teknolojia. Tsotra live stream ny efijery na fampiharana dia nandefa nandritra ny voaaro mpiara-to-mpiara fifandraisana, fa namela ny angon-drakitra ao an-trano.
Fiarahana ho an'ny fifandraisana matotra ny lahatsary amin'ny chat roulette tsy misy fisoratana anarana Chatroulette video mametra ny lahatsary amin'ny chat miaraka amin'ny ankizivavy Mampiaraka toerana fisoratana anarana maimaim-poana maimaim-poana tsy an-kanavaka amin'ny chat roulette online ny lahatsary amin'ny chat maimaim-poana hiresaka tsy misy video amin'ny chat roulette plus miaraka amin'ny ankizivavy